रणबिर् परिवार रक्सीको पारखी::kamananews
रणबिर् परिवार रक्सीको पारखी
बलिउड अभिनेता रणवीर कपुरले आफू रक्सीको कुलतमा नराम्ररी फसेको स्वीकारेका छन् । आफू मात्र नभएर आफ्नो परिवारै ‘जँड्याहा’ भएको उनको भनाई छ ।
‘रक्सी देखेपछि मेरो मनै थामिँदैन,’ एक अन्तरवार्तामा उनले भने, ‘जब पिउन थाल्छु, पिएको पिएै हुन्छु
आफूले रक्सी पिउने कुनै सीमा नभएको रणवीरले बताए । यद्यपि, अहिलेसम्म रक्सीले मातेर कुनै झैंझगडा वा उपद्रो भने नगरेको उनको दावी छ ।
रणवीरले आफू मात्र नभएर परिवारका सबै सदस्यहरु रक्सीको सौखिन भएको पनि बताए ।
‘हामी सँगै बसेर रक्सी पिउँछौं र रमाइलो गर्छौं, यस्तो लाग्छ रक्सी त हाम्रो परिवारको जीनमा नै छ,’ रणवीरले भने ।
आफ्नो रक्सीको लत कम गर्न निकै प्रयास गरे पनि सफल नभएको उनी बताउँछन् ।
रक्सीको लतमा फँसे पनि आफ्नो फिटनेसमा भने निकै ध्यान दिन्छन् रणवीर । फिटनेसका लागि नियमित जिमका अलावा फुटबल खेल्ने गरेका छन् । उनी एउटा लोकल फुटबल टिमका सदस्य हुन् ।
‘हामी प्रत्येक हप्ता २-३ पटक फुटबल खेल्छौं, फुटबलले मलाई फिट राख्नुका साथै मनोरञ्जन पनि दिन्छ,’ उनले भने ।
यी अभिनेत्रीको एक रातको रेट कति ? यस्तो आयो जवाफ
मुम्बई – पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर एक्लै बस्दै आएकी बलिउड अभिनेत्री एवम् मोडल सोफिया ह्यातसँग एक व्यक्तिले रात विताउन चाहेको खुलासा भएको छ । ती व्यक्तिले सोफियासँग एक रातको कति रेट हो भनेर प्रश्न...
सलोनको पहिलो प्रेम करिश्मा
नायक सलोन बस्नेत र नायिका करिश्मा श्रेष्ठ प्रेममा छन् । सलोन र करिश्माको पहिलो प्रेम नै यी दुई हुन् या होइनन् यो त उनीहरुले नै जान्ने कुरा हो । तर, असार २९ गतेबाट रिलिज हुन...
कपाल काट्दाकाट्दै किन रोइन् सोनाली – पढ्नुहोस
क्यान्सरपीडित भारतीय अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे अहिले न्यूयोर्कमा उपचाररत छिन् । क्यान्सर चौंथो स्टेजमा पुगिसकेकाले उनको उपचार निकै जठिल हुने मानिएको छ । यद्यपि, सोनालीले हिम्मत हारेकी छैनन् । उनको अनुहारबाट मुस्कान हराएको छैन । सामाजिक...
अशोक दर्जीले काटिदिए बैनीको हात / यस्तो रहेछ कारण
अहिलेका चर्चित बाल गायक अशोक दर्जीको घर जब क्या रमाईलो टि भीको युनिट पुग्यो तब धेरै नौलो कुरा थाहा भयो। अशोक लाई त हाम्रो टिमले भेट्न पाएन तर उनको छिमेकी र आन्फत लाई भने...
कपिल शर्मामाथि पनि बायोपिक बन्ने, प्रमुख भूमिकामा कृष्णा अभिषेक
बलिउडमा विभिन्न विवादित सेलिब्रिटीहरुको बायोपिक बन्ने क्रम तीव्र भएको छ । सञ्जय दत्तको बायोपिक ‘सञ्जु’पछि सन्नी लियोनीको बायोपिक ‘करणजित कौर’ प्रदर्शनको क्रममा छ । अब अर्का विवादित सेलिबि्रटीको बायोपिक बनाउने तयारी एक निर्माताले गरेका छन्...
रियल हिरो सञ्जय दत्तले फिल्म ‘सञ्जु’बाट कति कमाए?
एजेन्सी– बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको बायोपिक फिल्म ‘सञ्जु’ले यतिबेला फिल्म बजारमा उत्कृष्ट व्यापार गरिरहेको छ। फिल्ममा सञ्जयको भूमिकामा रणवीर कपुर छन्। कुनै पनि बायोपिक फिल्म बनाउनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिबाट प्रतिलिपि अधिकार लिनुपर्ने हुन्छ। सञ्जु निर्माणका...
अक्षय कुमारको फिल्म यसकारण लत्याइन् दिशा पटानीले
हेर्दाहेर्दै बलिउडकी ‘मोस्ट डिमान्डिङ’ अभिनेत्री बनेकी छिन् दिशा पटानी । ठूला-ठूला निर्माता निर्देशकहरु अफर बोकेर उनीकहाँ लाइन लागिरहेका छन् । दिशाले अहिलेसम्म दुईवटा मात्र बलिउड फिल्म खेलेकी छन् । र, ती दुवै फिल्म हिट भएका...
यस्ती छिन् चकलेटी नायक दिलिप रायमाझीकी छोरी, चाँडै नै फिल्ममा देखिने यस्तो तयारी
नेपाली सेलिब्रेटीका छोराछोरीहरुको फिल्ममा डेब्यु गर्ने होडबाजी चलेको बेला सुन्दरताको निकै चर्चा पाएकी नायक दिलिप रायमाझीको छारी दिब्या रायमाझिले कहिले फिल्ममा डेब्यु गर्लिन भन्ने चासोको विषय बनेको छ। दिब्या सपरिवारसँग अमेरिका बस्दै आएकी छन् ।...
बलत्कार मुद्दापछि मिथुनका छोराको बिहे रोकियो
भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्तिका छोरा महाक्षयको शनिबार हुने भनिएको बिहे रद्द गरिएको छ । महाक्षयमाथि बलत्कारको आरोपमा मुद्दा परेको थियो । विवाहको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी समारोहस्थलमै पुगेपछि बिहे रद्द गर्नुपरेको हो...